बजाज मोटरसाइकल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यो पढिहाल्नुस – Online Khabar 24
काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी रहेको छ । नेपालमा बजाजका डिस्कभर, प्लाटीना, एभेन्जर, पल्सर र डोमिनार सिरिज विक्री भइरहेको छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
बजाजले नेपालमा १०० सीसीदेखि ४०० सीसी क्षमतासम्मका मोटरसाइकल विक्री गर्दै आएको छ ।
बजाजले नेपालमा विक्री गर्ने सबैभन्दा सस्तो मोटरसाइकल प्लाटीना १०० ईएसको मूल्य १ लाख ८९ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, बजाजले नेपालमा विक्री गर्दै आएको ३७० सीसी क्षमता भएको बजाज डोमिनार ४०० को मूल्य ५ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपालमा बजाजको पल्सर सिरिज निकै नै लोकप्रिय मोटरसाइकलको रूपमा स्थापित भएको छ । नेपाली बजारमा सबैभन्दा धेरै विक्री हुनेमा बजाज पल्सर १५० पहिलो नम्बरमा पर्छ । त्यस्तै, २०० सीसी सेग्मेन्ट लिडरको रूपमा बजाज पल्सर एनएस २०० रहेको छ । त्यसैगरी, बजाज पल्सर २०० नेपालको पहाडी भेगमा अत्याधिक रुचाइएको मोटरसाइकलमा पर्छ ।
बजाजले विक्री गर्ने प्लाटीना १०० ईसको मूल्य १ लाख ८९ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, डिस्कभर १२५ डिस्क भर्सनको मूल्य २ लाख १४ हजार ९०० रुपैयाँ, डिस्कभर १२५ ड्रमको २ लाख ९०० रुपैयाँ र डिस्कभर १२५ एसटीको मूल्य २ लाख २५ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी बजाज एभेन्जर २२० क्रुजरको मूल्य ३ लाख ६४ हजार ९०० रुपैयाँ र एभेन्जर १६० स्ट्रीटको मूल्य ३ लाख ४३ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, पल्सर सिरिजमा पल्सर २२० एफको मूल्य ३ लाख ५९ हजार ९००, पल्सर एनएस २०० एफआई÷एबीएसको मूल्य ३ लाख ९१ हजार ९०० रुपैयाँ, पल्सर २०० एबीएसको मूल्य ३ लाख ६५ हजार ९०० रुपैयाँ र पल्सर एनएस १६० को मूल्य ३ लाख १९ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, पल्सर सिरिजमा सर्वाधिक विक्री हुने पल्सर १५० टीडीको मूल्य २ लाख ८९ हजार ९०० रुपैयाँ र पल्सर १५० को मूल्य २ लाख ७४ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको । यस्तै पल्सर सिरिजकै सबैभन्दा सानो मोटरसाइकल पल्सर १२५ को मूल्य २ लाख ४४ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ ।
बजाजले नेपालमा विक्री गर्ने दुई प्रिमियम मोटरसाइकल बजाज डोमिनार सिरिजको डोमिनार २५० को मूल्य ५ लाख १८ हजार ९०० रुपैयाँ र डोमिनार ४०० को मूल्य ५ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevिय राशीका ब्यक्तीहरू अाजको दिन निकै सतर्क हुनुहोला अन्यथा अाइपर्न सक्छ यस्तो अापत् ! हेर्नुहोस आज २०७८ कात्तिक ७ गते आइतबारको राशिफल
next४९ वर्षमा भारतीय चर्चित नायक गोबिन्दाले नेपाली चेली सुनितासँग दोस्रो विबाह गरेको रहस्य यस्तो !